Soavaly Hanoveriana, karazany mitarika amin'ny akanjo sy fampisehoana mitsambikina | Soavaly Noti
Soavaly Hanoveriana, iray amin'ireo karazana fitsambikinana indrindra
Ny karazana soavaly Hanoveriana dia iray amin'ireo karazana zana-kazo mahazatra amin'ny Dressage. Ankoatr'izay dia iray amin'ireo lehibe indrindra izy io mahay amin'ny fifaninanana mitsambikina. Izany dia vokatry ny toetra mampiavaka azy: ny anatomia mahery sy voalanjalanja ary ny toetrany maha-olona azy. Izany rehetra izany no nahatonga azy iray amin'ireo karazany nahomby indrindra tamin'ny sehatry ny fanatanjahantena ary noho izany amin'ny laza.
Na izany aza, ny famoronana ny ny karazany dia natao tao an-tsaina mba hahazoana soavaly manana fahaiza-manao tsara amin'ny asa fambolena. Soavaly izay be mpampiasa amin'ny tafika. Ny karazana equines izay niafara tamin'ny iray amin'ireo sarobidy indrindra amin'ny fanatanjahantena araka izay efa nambaranay.
Ilay soavaly Hanoverianina, Izy io dia niandoha tamin'ny taonjato faha-XNUMX tao an-tanànan'i Hannover, Alemana, izay niavian'ny anarany.
Vokatry ny fiampitana mares samy hafa ao amin'ilay faritra miaraka amina toetra tsara amin'ny asa fambolena y kopian'ny Holstein karazany. Ity fiampitana ity dia niteraka ny fahazoana biby kanto eny an-tendrombohitra sy hazavana, izany koa afaka nanao asa an-tsaha mahazatra.
Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia ovaina ny karazany mba hifanaraka amin'ireo fampiasana vaovao nomena azy, mandra-pahatongany any amin'ny Equine ankehitriny.
1 Mampiavaka ny Soavaly Hanoveriana
2 Bebe kokoa amin'ny tantarany
Mampiavaka ny Soavaly Hanoveriana
Miaraka amin'ny haavony eo anelanelan'ny 155 cm sy 170 cm, ity dia karazan'akanjo tena mailamailaka, izay ny hery mitsambikina dia miavaka tokoa. Io toetra io dia vokatry ny azy rantsambatana: matanjaka, matevina, somary fohy ary misy tonon-taolana tononina.
Manana lamosina lava izy io, volo hozatra ary rambony avo lenta. Amin'ny faran'ny tendany lava manify, misy ny lohan'ny habe antonony, izay manana maso maneho hevitra.
Andao izao hiresaka momba ny palitaon'ny soavaly Hanoveriana. Ny sosona dia afaka miovaova be, miaraka amin'ireo loko matevina, izay be indrindra volontsôkôlà mainty na chestnut dia mahazatra.
Ny fahalianana amin'ny palitao an'ity karazana ity dia teo am-piandohana dia soavaly fotsy no voafantina, saingy ny génétique no nahatonga an'io loko io hanjavona tanteraka.
Raha ny toetrany dia mitovy ny môly milamina amin'ny natiora, tena mailaka sy manan-tsaina na dia indraindray aza, indrindra amin'ny hybrida, dia afaka mampiseho ny hamafin'ny fony izy ireo.
Ireo toetra ireo dia nahatratra indrindra tamin'ny alàlan'ny fanilihana ireo biby mahery setra tamin'ny fotoana niterahana, ireo izay mitovy amin'ny toetra milamina ihany no ampiasaina.
Bebe kokoa amin'ny tantarany
Efa noresahintsika tamin'ny fiandohan'ny lahatsoratra fa ny karazany Hanoverianina dia avy amin'ny Holsteiner. Ho fanampin'izany, dia misy rà amin'ny alàlan'ny anglisy sy ny soavaly voalohany nipoitra tany amin'ny faritra Hannover.
Mpanjaka anglisy ary indrindra King George IINanana fahalianana manokana tamin'ny karazany Hanoverianina izy ireo.
Io mpanjaka io mihitsy no Tamin'ny 1735 dia nanangana ny foibem-piterahana fanjakana voalohany tany Alemana izy. Ho an'ity tanjona ity ny toeram-piompiana stud Tanàna Celle. Soavaly hazakazaka izy ireo Holsteiners, taranaky ny maria teratany misy rà italianina, espaniola ary atsinanana, natao hisintona kalesy noho ny heriny sy ny fisehoany ivelany. Nampiasaina koa izy ireo mares izay nampiavaka azy ireo ho biby tena tsara amin'ny asa fambolena.
Ity farany dia zava-dehibe satria ny fiompiana an'io karazana io dia toy ny tanjona hahatratrarana soavaly tsara amin'ny asa an-tsaha sy mety ho izany koa marobe.
Io no karazana safidy hisintona kalesy mpanjaka anglisy hatramin'ny taonjato faha-1924. Tamin'ny 500, ny isan'ny soavaly dia XNUMX teo ho eo tao Celle. Nandritra ny Ady lehibe voalohany sy faharoa dia niharam-pahavoazana lehibe ny hazakazaka Hanoveriana.
Tamin'ny faran'ny Ady Lehibe Faharoa, ny fitaizana an'ny karazana Hanoveriana FANDROSOANA amin'ny fomba miavaka noho ny fitomboan'ny fampiasana azy ho an'ny fanatanjahan-tena. Vokatr'izany, Miampita miaraka amin'ny soavaly anglisy, amin'ny Trakehner ary amin'ny arabo, fahazoana a karazany matanjaka kokoa noho ny hetsika maivana kokoa aza. Natokana ho an'ny soavaly ho an'ny fifaninanana ary indrindra ny fifaninanana mitsambikina, ny fiompiana. Ity fomba vaovao amin'ny karazany ity dia nanova ireo ekipa ireo ho lasa atleta tena izy.
Nivoaka tsikelikely nanerana an'izao tontolo izao izy io, lasa iray amin'ireo karazana ankafizin'ny hetsika akanjo sy mampiseho fifaninanana mitsambikina ny vato misakana.
Amin'izao fotoana izao, ny karazany mitombo hatrany ao an-tanànan'i Celle, manao safidy henjana amin'ny santionany tsara indrindra hiantohana mandritra ny faharetan'ny karazany fa ny toetra mampiavaka azy ireo dia hitazona hatrany amin'ny fanatanjahantena. Ny Trakehners dia manohy manatrika ny fanamafisana ny vondrona soavaly, satria io karazana io dia nisy fiantraikany tamin'ny fampandrosoana ny karazana Hanoveriana tamin'ny fahombiazana lehibe.
Mba handrefesana ny fahamarinan'ireto ny soavaly dia manaraka ny fizotrany izay manondro be loatra ny mety ho an'ny fiompiana toy ny mampiavaka azy amin'ny fanatanjahan-tena. Ity fitsapana ity dia tanterahina rehefa feno roa taona sy sasany ny biby. Aorian'izany dia tsy maintsy mandalo fe-potoana izy ireo Fanadinana miaraka amin'ny mpitaingin-tsoavaly izay hanombanana ny fahafahany mitsambikina sy mitafy akanjo, ny toetrany sy ny fahaizany, ny fahaizany mitantana, sns. Ity fitsapana ity dia fantatra amin'ny hoe «Fitsapana ny andro zato». Raha tsy mihoatra ny isa napetraka 100 ny soavaly dia azo inoana fa tsy ho voafidy ho soavaly soavaly izy.
ny mares manana ny fizotrany misafidy manokana koa izy ireo, aloha manomboka fitsidihana fampirantiana hisafidianana ho an'ny mares tsara indrindra. Amin'ny telo taona manomboka ny fanadinana voalohany ataon'izy ireo any homena lanja ny fahavokarany.
Zava-dehibe indrindra amin'ny fisafidianana mares sy soavaly ho an'ny fiompiana karazana Hanoveriana dia ny Tompondakan'ny federaly alemanina, aiza ny famokarana soavaly alemanina tsara indrindra dia refesina isan-taona anisan'izany ity karazany ity.
Androany dia iray amin'ireo karazana soavaly fanatanjahan-tena lehibe indrindra eto an-tany izy io. Ny karazany Hanoveriana dia laharana voalohany nandritra ny 10 taona misesy nitafy akanjo avy amin'ny World Association of Sport Horse Breeders ary izy dia teo amin'ny telo voalohany tamin'ny fampisehoana nitsambikina nandritra ny 13 taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Soavaly Hanoveriana, iray amin'ireo karazana fitsambikinana indrindra
Ny soavaly Berber, mampiavaka ny iray amin'ireo tranainy indrindra